Iikholeji zeDelaware: I-SAT Score Ukuthelekiswa kokungeniswa
Ukuqhathaniswa kobucala-nge-Side ye-SAT Admissions Data kwiiKholeji zeDelaware
Urhulumente wesibini omncinci awunayo iikholeji zeminyaka emine, kodwa uya kufumana izikolo ezihle kakhulu kubafundi abanezigaba ezahlukeneyo zokulungiselela iikholeji. Izinga lokungeniswa kwee-admissions ukusuka kwiYunivesithi yaseDelaware ngokukhethekileyo kwizikolo ezimbalwa ezivuma phantse bonke abafake izicelo.
Ukuba uyazibuza indlela othelekisa ngayo izikolo zakho ze-SAT kubhalisele abafundi kuzo zonke zezikolo ezingezantsi, ungasebenzisa le tstsana ukuze uncede ukuba ubone ukuba uhamba njani.
Iikholeji ze-Delaware zeSAT izikolo (phakathi kwama-50%)
IDelaware State University 410 480 410 490 - -
KwiYunivesithi yaseDelaware 530 640 530 640 - -
IWesley College 370 460 370 470 - -
Amanqaku etafileni aphakathi kwama-50% abafundi ababhaliswe. Ukuba amanqaku akho angena ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwelinye leekholeji zeDelaware. Ukuba amanqaku akho angaphantsi kwele fayile eboniswe kwitheyibhile, ungalahlekelwa yiphina ithemba - khumbula ukuba ama-25% abafundi ababhalisile bafumana izikolo ze-SAT ngaphantsi kwezo zidweliswe.
Khumbula kwakhona ukuba izikolo ze-SAT ziyingxenye enye yesicelo. Okubaluleke ngakumbi kunamanqaku okuhlolwa asemgangathweni ngamabakala amahle kwiinkalo ezinzima (jonga iimpawu zerekhodi elomeleleyo lemfundo ).
Ezinye izikolo zingavavanya nesicatshulwa sakho yesicelo , imisebenzi yangaphandle kunye neencomo zengcebiso . Abanye abafundi abanamanani ahloniphekileyo (kodwa isicelo sobuthathaka jikelele) abanakho ukuba bangeniswe esikolweni. Kwaye, abanye abafundi abanamanani aphantsi (kodwa isicelo esinamandla) angamkelwa.
Ukuba uhlawula phantsi kwi-SAT yovavanyo, kodwa unayo ixesha ngaphambi kokufaka izicelo kwizikolo, unokuhlala ufumana umvavanyo kwaye uzama ukuphucula amanqaku akho.
Nangona ufumana ukuvavanywa emva kokuba uthumele izicelo zakho, unokubuyisela amanqaku akho aphezulu okuvavanya esikolweni, kwaye kufuneka athathe loo manqaku aphezulu kwi-akhawunti. Qinisekisa ukuba uhlolisise iwebhusayithi nganye yesikolo ukuze uthole ulwazi olusesikweni, kwaye uqiniseke ukuba baya kwamkela amanqaku akho angeniswe kwakhona.
Cofa kwigama lesikolo ukujonga iphrofayili yalo, uzalise ngeenkcukacha zokungeniswa, izibalo zoncedo lwemali, kunye nokunye.
Unokuphangela kwakhona ezinye i-SAT (kunye ne-ACT) izixhumanisi:
IiMculo eziPhindwe kakhulu
Ukuqonda indlela i-PHP Sessions Work
Ikholeji ye-Haverford i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ngaba kukho i-Solutrean-Clovis Connection kwi-American Colonization?
Iimpawu zeMekhali ezilula
Uluphi umhlathi othelekisa ngesiNgesi ngegrama?
10 amaLwandle aphezulu kunawo wonke kwihlabathi